Privy: Ampitomboy ny fivarotanao amin'ny fivarotana an-tserasera miaraka amin'ity sehatra marketing ecommerce feno ity
Ny fananana sehatra ara-barotra vita tsara sy mandeha ho azy dia singa manan-danja amin'ny tranokala e-varotra rehetra. Misy hetsika 6 tena ilaina izay tsy maintsy apetraka amin'ny tetikady ara-barotra e-varotra momba ny fandefasana hafatra: Ampitomboy ny lisitry ny lisitrao - Manampy fihenam-bidy tsara, spin-to-wins, fly-out, ary fampielezan-kevitra amin'ny fivoahana mba hampitomboana ny lisitrao ary hanome a Ny tolotra mahasarika dia tena ilaina amin'ny fampitomboana ny fifandraisanao. Fanentanana - Fandefasana mailaka tongasoa, gazetiboky mitohy, tolotra ara-potoana, ary lahatsoratra fandefasana mba hampiroboroboana ny tolotra sy
Ny orinasanay vao haingana no nampihatra Salesforce Marketing Cloud ho an'ny mpanjifa iray izay manana fampidirana am-polony eo ho eo izay misy fiovana sarotra sy fitsipika momba ny fifandraisana. Ny fotony dia ny Shopify Plus base miaraka amin'ny Recharge Subscriptions, vahaolana malaza sy malefaka ho an'ny tolotra e-varotra mifototra amin'ny famandrihana. Ny orinasa dia manana fampiharana fandefasana hafatra amin'ny finday izay ahafahan'ny mpanjifa manitsy ny famandrihana amin'ny alàlan'ny hafatra an-tsoratra (SMS) ary mila mifindra monina any amin'ny MobileConnect ny fifandraisany amin'ny finday. Ny antontan-taratasy momba ny
Alakamisy Janoary 14, 2021 Alatsinainy, May 16, 2022 Douglas Karr
Ny fahazoana hafatra an-tsoratra voaray avy amin'ny marika nomenao alalana dia mety ho iray amin'ireo paikady ara-barotra farany azo tanterahina sy azo ampiharina azonao ampiharina. Ampiasaina raharaham-barotra anio ny SMS Marketing SMS: Mampiroborobo ny varotra - Mandefa fampiroboroboana, fihenam-bidy ary fanolorana fotoana voafetra mba hampitomboana ny fidiram-bola Miorina amin'ny fifandraisana - Manomeza serivisy ho an'ny mpanjifa sy fanampiana miaraka amin'ny resadresaka ifanaovan-tsehatra 2 Ataovy ny mpihaino anao - zarao haingana ireo fanavaozana lehibe sy vaovao miteraka fientanam-po - mpampiantrano